Gylfi Sigurdsson tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Gylfi Sigurdsson tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Nohavaozina farany teo Febroary 17, 2018
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra iray izay fantatry ny anarany malaza; "Ice Ice". Ny Gylfi Sigurdsson tantaram-pahaterahana ny tantaram-pahibemaso sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-niseho mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny zava-misy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fahaiza-manaony any an-tampon-doha izy saingy vitsy no mieritreritra ny Bio Gylfi Sigurdsson Bio izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Gylfi Sigurdsson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Gylfi Sigurdsson dia teraka tamin'ny andro 8 tamin'ny volana septambra 1989 tany Reykjavik, Islandy. Izy dia teraka tany amin'ny rainy, Sigurdur Adalsteinsson, Islandy mpanjono.
Nandefa baolina i Sigurdsson raha vao afaka nandeha. Natolotr'i Olafur rainy sy zokiny lahy ho mpilalao baolina izy. Nanofa trano iray ho an'ny ririnina ihany koa ny rainy ka tsy notapahina ny fitondrana fampiofanana ny zandriny. Olafur, zandriny lahy, dia tsy maintsy nampianatra ny tenany ary nandeha tany amin'ny sekolin'ny mpampiofana talohan'ny nahatonga azy ho lasa mpanazatra an'i Gylfi. "Niezaka nahita ny vHS rehetra hitako aho ary niezaka ny hianatra ny fomba fampiofanana ankizy kely"
Noraisin'ny rainy sy ny zokiny lahy tamin'ny taona 13 izy ary namindra azy tany Breiðablik avy ao amin'ny FH Hafnarfjörður (anaran'i Iceland) satria ny toerana nilalaovana baolina dia tsara kokoa tany. Nentina tany izy mba handroso.
Fífan, efitrano fatoriana mitatao lavalava, no namboarina vao haingana ary izany no zava-dehibe tao Sigurðsson izay nanao sonia an'i Breiðablik tamin'ny taona 13. Sigurðsson dia mpilalao matihanina foana nandritra ireo taona faramparany teo, ary nihanahary be dia be ny fotoana nandehanany sy ny fitifirany, hoy i Magnús Jónsson, mpanazatra an'i Sigurðsson tamin'ny taona 11 sy 14.
"Nanana fahaizana ara-teknika ambony izy rehefa nihaona taminy tamin'ny taona 14 aho, indrindra rehefa tonga teo amin'ny baolina kitra izy. Maro amin'ireo ankizilahy hafa no tsara toetra fa ny fandalovany sy ny fitifirana azy dia kilaometatra mialoha, " hoy i Jonsson.
"Sigurðsson dia, tahaka ireo zaza tsy tambo isaina tamin'ny fahanterany niaraka tamin'ny Matoanteny amin'ny teny islandey, mahaliana ny fanatsarana, ny fiofanana mandritra ny ora maro, ary ny finiavany handresy dia goavana, na inona na inona ny toe-javatra " manampy an'i Jónsson.
"Nampiofana tsara hatrany izy ary te handresy ny fifaninanana rehetra amin'ny fampiofanana, na izany dia fanasaziana na fanatanjahan-tena baolina kitra. On top fa, hNanao zavatra fanampiny foana izy hatramin'izay, nandray anjara hatrany tamin'ny sekolin'ny baolina kitra izy ary nijanona taorian'ny fianarana rehetra hanao zavatra fanampiny, " hoy i Jónsson.
Gylfi dia nanomboka ny asany matihanina amin'ny Reading ao amin'ny Championship, ary tamin'ny 2010 dia namidy tany Hoffenheim izay fivarotana lehibe indrindra an'ny Reading.
Nifidy ny Player of the Season izy nandritry ny fizaran-taona roa - ho famakiana amin'ny 2009-10 sy ho an'i Hoffenheim ao amin'ny 2010-11. Taorian'ny fotoam-pialantsasatra tamin'ny baolina anglisy tamin'ny Swansea City dia nikambana tamin'i Tottenham Hotspur ho £ 8.8 tapitrisa izy, ary tao 2014 dia niverina tany Swansea ho anisan'ny fifanakalozana ho an'i Ben Davies. Taorian'ilay hazakazaka mahagaga tao amin'ny Euro 2016 dia nahazo fankasitrahana iraisam-pirenena i Gylfi, ka nanjary ny Tork Woods amin'ny teny islandey.
Taorian'ny Euro 2016, Gylfi, zanaky ny mpanjono, dia lasa mpilalao baolina kitra malaza indrindra ao amin'ny firenena. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Gylfi Sigurdsson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Izy no vehivavy mihazona ny fanalahidin'ny fon'i Gylfi. Alexandra dia nahazo ny fizarana Miss World Sporty tamin'ny fifaninanana Miss World tany Afrika Atsimo tamin'ny 2008. Nahazo an'i Miss Island tamin'io taona io ihany koa izy.
Rehefa nandeha ny làlan-dàlana tany Afrika Atsimo 9 taona maro lasa izay i Alexandra dia mpianatra psikology, izay nitanisa ny fitiavany ho toy ny any an-tokotany sy any ivelany, ary koa ny nanambara ny sakafo tiany indrindra dia ny rambony saka ary ny salady salady. Ankehitriny, vehivavy mpitoraka bilaogy sady mpitoraka bilaogy izy izay mibilaogy ny diany manerana izao tontolo izao.
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, dia samy miaina fiainana mangina ao Merseyside miaraka amin'ny alikany ireo mpifankatia, efa niaina tany Swansea sy Londres.
Gylfi Sigurdsson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny rain'i Gylfi Sigurdsson dia mpanarato izay anisan'ny iray amin'ny tsara indrindra ao amin'ny fireneny. Ity no Sigurdur Adalsteinsson sy ny zanany lahy tiany indrindra, Gylfi.
Nahazo fitahiana lehibe avy amin'ny fianakaviany ihany koa i Sigurðsson, izay nanampy azy nandritra ny asany. Niala tany Islandy izy mba hanatevina laharana raha mbola 15 ihany izy, fa kosa nanohana ara-bola mafy ny fianakaviany. Androany, ny fampiasam-bola baolina kitra dia nandao ny fianakaviany nandritra ny androm-piainany.
"Hitako mazava fa zavatra manan-danja no nanampy azy ireo izay nanakaiky azy. Tena nahafinaritra ny zokiny lahy niara-miasa taminy on fozavatra mifandray amin'ny otball. Heveriko fa ny reny sy ny anabaviny koa dia nanampy azy tamin'ny lafiny ara-tsaina. Izany no antony lehibe mahatonga ny eto an-tany, " hoy i Jónsson.
Taorian 'i Olafur, ny zokiny lahy dia nahatsikaritra fa ny rahalahiny dia tokony handeha, dia nanao asa tao anaty golf izy.
Izy no mpilalao mahay, na dia nahazo tombontsoa ho an'ny Eoropeanina aza izy tsy mba niova ho azy.
Gylfi Sigurdsson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana manokana
Gylfi Sigurdsson dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
hery: Gylfi dia tsy mivadika, mandalina, tsara fanahy, miasa mafy amin'ny fomba aman-toetra.
fahalemena: Indraindray, i Gylfi dia afaka maneho fahamendrehana, manahy ny tenany na ireo hafa tiany. Izy no karazana olona izay te-hampihatra baolina kitra mandritra ny tontolo andro tsy misy fotoam-pialan-tsasatra afa-tsy amin'ny fidirana an-tsehatr'i Alexandra.
Izay tiany: Gylfi dia tia biby, sakafo ara-pahasalamana, boky, natiora ary fahadiovana.
Izay tsy tiany: Gylfi tsy tia ny fahamendrehana.
Raha fintinina, i Gylfi dia olona tia mifantoka amin'ny tsipiriany kely indrindra rehefa mahazo torolàlana fampiofanana na fifandraisana.
Gylfi Sigurdsson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Miverina
Ny zokin'ny zokiolona iraisam-pirenena iray dia nizara sombin-dàlana kely avy amin'ny 2001 izay mampiseho ny taona 12 taona avy any Goodison.
Sigurdsson dia manakaiky ny sarivongan'i Dixie Dean izay mitafy jiro iray mivezivezy eo amin'ny mason'i Blue iray izay toa lehibe eo aminy. Navoaka ny lahatsorany; "Nampiofana nandritra ny herinandro niaraka tamin'i Everton, zazalahy kely tao Goodison ary nandeha niaraka tamin'i Everton tany Alemana nandritra ny fifaninanana iray."
Floki, toetran'ny mpilalao Soedoà Gustaf Skarsgard ao amin'ny andian-tantara malaza Vikings, no voalaza fa mpanorina ny firenena Gylfi Sigurdsson Islandy.
Gylfi Sigurdsson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Efa saika mpangalatra izy
Hambara ny fahamarinana !. Talohan'ny nidirany tao amin'ny famakiana, i Sigurdsson dia nisedra olana Arsenal - ny rivodoza misy azy amin'izao fotoana izao. Iza no mahalala fa i Sigurdsson dia afaka nilalao ho an'ny elatry ny Rotana any Avaratr'i Londres dia efa niasa ny fitsarana. Na dia eo aza ny hadisoana, dia mbola mitazona toerana mahatsikaiky ho an'ny Club London Avaratra izy.
Gylfi Sigurdsson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Pmanohana an'i Swansea
Fantatry ny Rainy tsara indrindra izany. Ny alina talohan'ny niatrehany ny fihaonana mafonja niaraka tamin'ireo mpampiasa taloha, dia nanapa-kevitra ny hiantso hody i Gylfi Sigurdsson. Tena ilaina ny torohevitra azony.
'Niresaka tamin'ny dadako Sigurd aho.' ny mpilalao baolina Everton dia nanazava indray androany. 'Hoy izy hoe, "Na inona na inona ataonareo dia aza ankalazaina". Nandany telo taona sy tapany tany Swansea aho, nilalao ny lalao Premier League voalohany teo. Manana fanajana be loatra aho. Raha nilaza izy fa tsy mankalaza ny teniko, "Fantatro". Tsy hanao an'izany mihitsy aho. '
Nofintinin'i Sigurdsson ny tanjany mahafinaritra tamin'ny alàlan'ny fitokonan'ny mpikapoka sy ny tongotra izay nifidy ny tanjon'ny volana. Taorian'ny sasantsasany, nahatsapa tsara izy teo amin'ny zony mba hamela ny fihetseham-pony rehetra.
FACT CHECK: Misaotra noho ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Gylfi Sigurdsson momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Tantaran'i Josip Ilicic Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Arkadiusz Milik Tantaran'ny Ankizy Miampy Filazana Untold Biography Facts
Erling Braut Haaland Tantara momba ny fahazazan-jaza ary Untold Biography Facts
Rafa Silva Childhood Tantara Plus Untold Biography Facts
Teemu Pukki Childhood Tantara Plus Untold Biography Facts
Kieran Tierney Tantaran'ny fahazazana ho an'ny fahazazana manampy ny Untold Biography Facts
fiamma Novambra 6, 2018 Tamin'ny 8: 12 hariva
fiamma Novambra 6, 2018 Tamin'ny 8: 14 hariva
Daty efa namboarina: 14 febroary 2020